मोहरमा बदलिएको फोहर : ' गल्नेबाट ग्याँस र नगल्नेबाट पैसा ' - Rajmarg Online
मोहरमा बदलिएको फोहर : ‘ गल्नेबाट ग्याँस र नगल्नेबाट पैसा ‘
देशकै नमुना उपमहानगरको ल्याण्डफिल
दाङ, ६ बैशाख । घोराही क्षेत्रको शहरीकरण बढेसँगै नगरपालिकाले २०६१ सालमा फोहर व्यवस्थापनको लागि ‘ल्याण्डफिल’ निर्माणको अवधारणा ल्यायो । त्यो अवधारणा ल्याएको १७ वर्षपछि घोराही उपमहानगर पालिकालाई फोहर व्यवस्थापनमा सहज मात्र भएको छैन, फोहरबाट ग्याँस नै उत्पादन सुरु भएको छ ।
नगरपालिकाले २०६२ साल असारमा साविकको वडानम्वर ९ र हालको १६ नम्वर वडाको करौंती डाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम थालेको थियो । उपमहानगरको त्यो ल्याण्डफिल देशकै नमुनामा पर्छ ।
बजार र बजार क्षेत्र नजिकका क्षेत्रबाट संकलन भएको फोहर त्यही क्षेत्रमा जम्मा हुने गरेको छ । घोराही क्षेत्रमा दैनिक १० देखि १५ टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले भने त्यही फोहरलाई मोहर बनाउने काम गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन गर्ने स्थान भने एउटा मात्र छ । त्यही ठाउँमा जम्मा भएको फोहोरबाट ग्याँस उत्पादनको काम ३ महिना अघिदेखि सुरु भएको छ । त्यसको जिम्मा नेपाल उर्जा विकास प्रा.लि. ले लिएको छ । प्रा.लि. का प्लान्ट म्यानेजर हरिष श्रेष्ठका अनुसार दैनिक २ सय ५० घन मिटर ग्याँस उत्पादनको काम भइराखेको छ ।
‘अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । त्यो कारण पनि ग्याँस समेत कम उत्पादन भएको छ । यो क्रमश बृद्धि गरेर लैजाने योजना छ’, म्यानेजर श्रेष्ठले भन्नुभयोे, ‘उत्पादन भएको ग्याँस पाइपलाइनमार्फत् घरघरमा पु¥याउने योजना छ । विशेष गरेर उपमहानगरको वडानम्वर १० र १६ का ४ सय ५० घरधुरीमा वैशाखसम्म ग्याँस पु¥याउने योजना छ ।’
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल उर्जा विकास कम्पनी र घोराही उपमहानगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न थालिएको घोराही उपमहानगरपालिका सरसफाई व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो सम्झौता ५ मंसिर २०७५ मा भएको थियो । फोहोरबाट ग्याँस उत्पादनका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ४० प्रतिशत रकम दिने छ, भने ६० प्रतिशत कम्पनी आफैले व्यहोर्ने सम्झौता छ । संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनी र नगरपालिकाबीच २० वर्षको सम्झौता छ । सम्झौता अनुसार २० वर्ष पछि संरचनासहित सबै पूर्वाधार उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट संकलित कुहिने फोहरबाट दैनिक एक हजार ३ सय किलो ग्याँस र ६ टन जैविक मल उत्पादन गरिनेछ ।
फोहरलाई मोहर बनाउने कामको थालनी भएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । ‘राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र उपमहानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ’, नगर प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘ग्याँससँगै कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र फोहर व्यवस्थापनमा समेत सहजता हुने नगरको विश्वास छ ।’
फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न थालिएको जिल्लामा यो पहिलो हो । जिल्लामा निर्माण गर्न थालिएको यस प्रकारको कार्य अवलोकन गर्नका लागि जिल्ला तथा बाहिरी जिल्लाबाट नागरिक आउने गरेका छन् ।
ग्याँस उत्पादन गर्न थालेपछि गलेर जाने वस्तुको सदुपयोग समेत हुने र वातावरण समेत राम्रो हुने नगरपालिकाको विश्वास छ । उपमहानगरपालिकाले अहिले गल्ने र नगल्ने वस्तु छुट्टाछुट्टै उठाउने गरेको छ । नगल्ने फोहरसमेत उपमहानगरपालिकाले किन्न थालेको छ । यो कार्यले नगर सरसफाईमा र वातावरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरेको छ ।
घरघरबाट फोहर खरिद
उपमहानगरपालिकाले हिजोआज घर–घरबाट फोहर खरिद गर्ने गरेको छ । फोहरबाट पँैसा आउन थालेपछि स्थानीय समेत खुसी छन् । उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकको बोतलसहित नरम पोलिथिन कपडा सूर्तीजन्य प्लाष्टिकको फोहर कापीसहित वर्गीकरणअनुसार फोहरलाई २ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्ममा किलोमा खरिद गर्ने गरेको शाखा प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । खरिद गरिएको गल्ने फोहरलाई बायोग्याँसमा प्रयोग गरिने र नगल्ने फोहरलाई बिक्री गरिने काम भइराखेको छ । यसले नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतमा समेत टेवा पुग्ने गरेको छ ।
उपमहानरपालिकाबाट उत्पन्न हुने फोहरबाट ग्याँस निकाल्ने भएपछि यहाँको फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने र ल्याण्डफिल्ड साइटको आयुसमेत बढ्ने देखिन्छ । प्रत्येक वडाका टोल विकास संस्थाले नगल्ने फोहोर निश्चित ठाउँमा संकलन गर्ने र घोराही उपमहानगरले उक्त फोहोर खरिद गर्ने गरेको छ । उपमहानगरले प्लाष्टिकका झोलालाई निरुत्साहित गर्दै कागज र फाइवरका झोलालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ । फोहोरलाई पँैसासँग जोड्ने र ल्याण्डफिल साइडमा शून्य फोहोरको अवस्था ल्याउने सोंच नगरको छ ।
गल्ने फोहोरलाई घरकै करेसाबारीमा प्रयोग गर्नेदेखि बायोग्याँस र मल बनाउन सकिने गरी काम भइराखेको सरसफाई तथा वातावरण विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक शक्तिराम डाँगीले बताउनुभयो । ‘नगरले प्लास्टिक, शिशा, गत्ता तथा कपडाका टुक्रालाई छुटाएर खरिद गर्ने र ल्याण्डफिल साइडमा फालिँदै आएको फोहोरलाई पँैसामा रूपान्तरण गर्ने काम भइराखेको छ’,संयोजक डाँगीले भन्नुभयो ।
फोहोरको व्यवस्थापन घरबाटै सुरु गर्नका लागि नगरपालिकाले पर्चा पम्पलेट बाँड्ने विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु समेत गर्दै आएको छ । ‘टोलवासी, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग फोहर व्यवस्थापनको बारेमा निरन्तर संवाद र छलफल गर्दै आएका छांै’, संयोजक डाँगीले भन्नुभयो, ‘यसले नगर क्षेत्र सफा राख्न र फोहरमैला व्यवस्थापनमा सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने काम भएको छ ।’
नगरमा फोहोरमैला उठाउन ८ वटा गाडीहरु प्रयोग गरिएका छन् । दैनिक दुई पटक ती गाडीहरु फोहर संकलनका लागि बजार क्षेत्रमा परिचालन हुने गरेका छन् । विगतमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत विकास निर्माण क्षेत्रमा नगर उत्कृष्ट समेत भइसकेको छ ।
फोहर गर्नेलाई यस्तो छ, दण्डको व्यवस्थाः
नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ को व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यो व्यवस्था अनुसार फोहर गर्नेलाई नगर वा सम्बन्धित वडाले कार्यविधि अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार यस्तो छ दण्डको व्यवस्था
क) जथाभावि फोहर फाल्ने वा गर्ने व्यक्तिलाई नगरपालिकाले पहिलो पटक भए तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
ख) दोस्रो पटक गरेमा तीनदेखि ७ हजारसम्म जरिवाना ।
ग) तेस्रो वा सो भन्दा बढि पटक भएमा प्रत्येक पटकका लागि दश हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना र फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असुलउपर गर्नसक्ने ।
घ) कसुर गर्नेलाई नगरप्रमुखले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना सजाय गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी नगर प्रमुखले कसुर गर्नेलाई पाँचदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ बमोजिम तीन महिनासम्म कैद वा दुवैको सजाय गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा सेवा सुविधा तथा ऋण कारोबार रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । ‘तोकिएको सेवा शुल्क नबुझाउने वा बुझाउन अटेर गर्ने व्यक्तिको नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने कुनै सेवा सुविधाको अतिरिक्त विद्युत तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गरिदिने तथा निजको नामको घर जग्गा बिक्री वा कुनै बैंकबाट भइरहेको ऋण कारोबार रोक्का गर्नका लागि नगरपालिका वा सम्बन्धित वडाले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरेर फोहर व्यवस्थापनका लागि नवीनतम अवधारणाहरुको विकास गर्न, त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिका सम्बन्धित वडाले सम्मानस्वरुप पुरस्कार दिनसक्ने र जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थुपार्ने वा फाल्ने व्यक्तिको बारेमा प्रमाणसहित उजुरी दिने व्यक्तिलाई नगरपालिका र वडाले सम्मान एवं नगद पुरस्कारको समेत दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
Prevराप्ती नदीमा जथाभावि उत्खनन : सुक्दै मुल, घट्दै वहाव
Nextदाङसहित देशभर आजदेखि कृषि गणना गरिदै